Aussiedoodles: Kpoo Einstein nke ụwa nkịta - Dịrị
Kedu ihe ị ga - enweta ma ọ bụrụ na ị gwakọtara nkịta abụọ kachasị mara mma, nke kachasị mma ndị mmadụ hụrụ n'anya ebe ahụ? Aussiedoodle mara mma!
A makwaara dị ka Aussie Poo ma ọ bụ Aussie Poodle , Ngwakọta Shepherd Poodle nke Australia bụ ihe na-atọ ụtọ nke na-enweta aha otu n'ime ụmụ 'Einstein' nke ụwa canine. Njikere ịmụtakwu? Nọnyere anyị ma gaa n'ihu na-agagharị.
Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma banyere nkịta a na-egbuke egbuke
Kedu ihe Aussiedoodle dị?
Obi: Aussiedoodles bụ ezigbo nkịta ezinụlọ?
Nke a bụ otu esi elekọta enyi Aussiepoo gị
Hà nwere nsogbu ahụike ọ bụla?
Achọrọ m otu! Kedu ka m ga-esi nweta Aussiedoodle?
More Doodles maka gị!
Uru na ọghọm: Ì kwesịrị inweta Aussiedoodle?
Aussiedoodle bụ otu n'ime ụdị a na-akpọ ụdị mmebe nke adịgogo karịa ka anyị siri mara, mana ụfọdụ na-ekwu na akpachapụrụ anya kee ha kemgbe 1990s na North America.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ngwakọ, ị nwere ike ịchọta ụfọdụ puppy na nne na nna dị ka Aussiedoodles, mana ọtụtụ mmadụ na-achọ F1 puppy - a mix of a purebred Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia na onye dị ọcha Poodle .
Mana ka, ebe nke a bụ obe, Aussiepoos enweghị ike ịdenye aha ya na American Kennel Club (AKC).
Ọ bụ ihe dị mma na e nwere òtù dị iche iche na-amata ụdị dị iche iche agwakọtara dị ka ndị ahụ American Canine ngwakọ Club (ACHC), ndị Okike Nkịta ulo nkita (DDKC), ndị Ndepụta Canine International Designer (IDCR), na Akwụkwọ mmebe nke onye mmebe (DBR).
Gini mere ha ji buru oke nkita? Nke a bụ ngwakọta nke àgwà kacha mma nke ndị nne na nna ha - ike na ụkpụrụ ọrụ nke Aussie na smarts na iguzosi ike n'ihe nke Poodle.
Dịka ị ga-atụ anya ya, ngwakọta Australian Shepherd Poodle nwere ike keta nne na nna ya; ọdịdị, mana ọ bụghị mgbe niile 50/50.
Fido a nwere ntị na anya mmiri nwere ike ịbụ ndo aja aja ma ọ bụ gbaa ọchịchịrị, ebe ụfọdụ nwere ike ịnwe anya na-acha anụnụ anụnụ.
Ha ọdụ nwere ike ogologo na dịtụ curved dị ka a Poodle, ma ọ nwere ike na-kwụsịrị na mkpụmkpụ ka Australian Ọzụzụ Atụrụ.
Size: Kedu otu nnukwu ego Aussiedoodle ga-esi nweta?
N’ozuzu, nwoke na nwanyị hà. Ha nwere nkezi ibu Pound 25 ruo 70 (11 ka 32 n'arọ) na ihe dị ka 10 ruo 15 sentimita asatọ (25 ruo 38 cm) elu n'ubu.
Aussiedoodles nwere ọtụtụ nha. Nke ahụ bụ n'ihi na Aussie nwere ike ịzụ otu n'ime atọ Poodle nha: egwuregwu ụmụaka , miniature , ma ọ bụ ọkọlọtọ .
Enwekwara ike iji obere ndị ọzụzụ atụrụ Australia mepụta ụdị nke pere mpe. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-azụ ihe na-achọ ime toy ma ọ bụ obere Aussie Poos nke nwere ike ịdị kilogram 11 n'arọ na n'okpuru 10 sentimita 25 n'ogologo .
O siri ike ịkọ mgbe ha ruru ogogogo na ogo ha. Zọ kachasị mma iji mara bụ ịgwa onye na-azụ ha okwu ma hụ ụdị nne na nna ha.
Ọ bụrụ na ịnakwere nwa nkita na enweghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi mara, ị ga-adị njikere maka ihe ijuanya.
Ọ bụrụ na nwa nkịta na-eto ngwa ngwa na ọnwa isii, ị nwere ike ịkọ na ha nwere ike nọrọ ọkara na obere.
Ma ọ bụrụ na ha kụrụ akara ọnwa isii ahụ ma gosipụta ihe ịrịba ama nke ịkwụsịlata, ị nwere ọkara na nnukwu nkịta na aka gị.
Ọ bụ ezie na ụdị ọ bụla nke Aussie doodle nwere ike ibi n'ụdị ụlọ ọ bụla, ọ bụrụ na ha nwere mmega ahụ zuru oke, obere ọdịiche dị mma maka ndụ ụlọ n'ihi na ha nwere ike ị nweta ike ha n'obere oghere.
Ndi Aussiedoodles hypoallergenic?
Fọdụ ndị nwe ha kwuru na Aussiedoodles ha bụ hypoallergenic , ma ị gaghị ekwenye mgbe niile nwa na-abụghị nke ịwụfu ma ọ bụrụ na otu n'ime ndị nne na nna wụsa. Nke sị, ngwakọ a nwere ike ịbụ na-abụghị nke obere ịwụfu .
Ihe ka ọtụtụ n’ime ha bụ ndị na-agbapụta oge nwere uwe mkpuchi nke dara n’oge opupu ihe ubi wee daa. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-arịa nfụkasị, mix Australian Shepherd Poodle mix nwere ike ọ gaghị abụ nhọrọ kacha mma maka gị.
Uwe ha nwere ike ịbụ ụdị textures dịgasị iche iche, mana o siri ike ịkọ ihe ị ga-enweta mgbe ị na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka ọ dị mma.
Fọdụ nwere ajị anụ na-efegharị efegharị, ntutu anwụ, ma ọ bụ ogologo . Ha na-abanyekwa na ndò dị iche iche dị ka red merle, blue blue, black and tan (nke a makwaara dị ka phantom), oji na uhie uhie, sable, parti, ma ọ bụ ọbụlagodi agba siri ike n'ọnọdụ ndị na-adịghị adịkarị.
Ee ha bụ! Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịbụ otu ụdị Einstein, nkịta ndị a anaghị atụ egwu ịkpa ọchị, ngwugwu niile ga-enwekwa obi ụtọ na ha na-enweghị isi. Ndị nwe ha kọwara ha egwuregwu na-atọ ọchị nke na-atọ ụtọ .
Can nwere ike ịlele vidiyo a nke mara mma ma na-atọ ọchị Aussiedoodles:
Ha nwere ike iwetara gị onyinye naanị ka ị danye ya ka ị ruru ya ma gbaa ọsọ. Ha na-enwe mmasị n'ịchụ nta, ịchụ, na igwu ọgụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nkịta nke na-anọsi ike na nwayọ n'ala, lee ebe ọzọ. Nkịta ndị a bụ bouncy, ihe ike, springy jumpers . Lezie anya ma ọ bụrụ na ịnwere ogige dị mkpirikpi!
N'agbanyeghị ihe ha na-eme, ha w ndanda ka ha na ndi ha . Njem? Weta Aussiedoodle gị. Na-arụ ọrụ? Were ha gaa n'ọfịs. Ọgwụ dọkịta? Na-egwu egwu! Agbanyeghị, ha ga-esonyere gị ma ọ bụrụ na ị hapụ ha.
Ihe na-adịghị mma bụ na ịhụnanya niile na-enwe nkụda mmụọ mgbe ị na-apụ, nsonaazụ ya nwere ike ịbụ nkewa nchegbu .
Ọ bụrụ n’iche na Aussiepoo gị ga-ehi ụra n’elu ala, chee echiche ọzọ. Ha ga-achọ ọ bụghị naanị na gị na gị dinara, kamakwa ịrahụ ụra na ohiri isi gị na isi ha (na mgbe ụfọdụ butt) na ihu gị.
N'ezie, i nwere ike ịzụ ha ka ha hie ụra na a akpati ma ọ bụ ụlọ ọzọ, ma ọ dịghị mgbe ha na-enwe obi ụtọ karịa mgbe ha na mmadụ kachasị amasị ha.
Ha bụ zuru oke nkịta ezinụlọ n'ihi na ha na-akpachara anya na ụmụaka ga-enyekwara ìgwè atụrụ gị aka ìgwè ewu na atụrụ.
N'ezie, ị kwesịrị ịkụziri ụmụaka otu esi emekọrịta nkịta ọ bụla, yana nke ọzọ, ọkachasị mgbe anụ ụlọ gị bụ anụ ọkụ na-adịghị mma.
Otú ọ dị, lezienụ anya. Aussiedoodle buru ibu nwere ike ịkụ aka nwa ma ọ bụrụ na ha enwee ọ excitedụ na mkpokọta. O doro anya na ị ga-achọ ịzụ pooch gị iji gbochie nke a ime.
Ma ị na-akuzi gị Poodle & Australian Shepherd mix ka ị hapụ site n’oge ruo n’oge ma ọ bụ otu esi akpa agwa n’ime ụmụaka, isi ihe bụ agbanwe agbanwe.
Nke a bụ smart ìgwè nke ahụ chọrọ ime gị obi ụtọ, yabụ ihe ị ga - eme bụ ime ka obi sie ya ike mgbe ọ na - eme ihe dị mma.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-apụ, nye Aussiedoodle gị ọgwụgwọ ma kwụghachi ya ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ dị jụụ.
Mgbe ị laghachiri, mee dị ka ọ bụghị nnukwu nsogbu na ị pụọ. Mgbe ahụ, ka oge ụfọdụ gasịrị, ị nwere ike inye ya ọgwụgwọ maka ịkpa ezi agwa.
Na ụmụntakịrị, ị nwere ike inye nkịta gị ọgwụgwọ mgbe ọ na-asọpụrụ ma dị jụụ. Gbaa omume rambunctious site n’ịkụziri ya ịnọdụ ala ma ọ bụ ịnọdụ ala mgbe ọ gbara ụmụaka gburugburu.
Aussiedoodles na-agba ụja nke ukwuu?
Zute Ziggy, the Mini Aussiedoodle - Isi ihe onyonyo
Nke a ngwakọ anaghi eme otutu ogbugbo , ma dị ka nkịta ọ bụla, ọ ga-adabere n'otú e si zụlite ha na ọzụzụ ha.
Mana n'ihi nne ma ọ bụ nna Aussie, otu n'ime nchegbu gị nwere ike ịbụ Aussiedoodle gị na-anwale ịzụ anụ ụlọ gị ndị ọzọ.
Ha pụtara nke ọma, mana ọ nwere ike iwe iwe nye obere ụmụ obere ajị gị, dị ka nwamba.
Ma echegbula, ma ọ bụrụ na a na-emeso nwa gị akwụkwọ ihe ma kụzie ya nke ọma, ha anaghị enweta nchebe ma ọ bụ na-eme ihe ike .
Mana ezigbo ihe ọzọ nke fido a ketara n'aka nne na nna Poodle ya bụ ịhụnanya ha nwere maka mmiri na igwu mmiri. Àgwà ha na-eme ka ha ọ bụghị naanị anụ ụlọ dị ịtụnanya, mana ha dịkwa magburu onwe ọgwụgwọ ma ọ bụ nkịta ọrụ .
Dabere na nha ha, Aussiedoodles nwere ike inye ọrụ ahụike ọgụgụ isi dị ka ime ka mgba ndị mmadụ nwere PTSD, nchegbu, ma ọ bụ ọrụ anụ ahụ dị ka ịhụ enyemaka anya.
Omume ha dị mma na-emekwa ka ha zuo oke maka ịkele ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ lekọta ụlọ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na nkịta a na-emepụta mmiri hụrụ mmiri n'anya, nke ahụ apụtaghị na ha nwere ike ijikwa nnukwu mmiri oyi ma ọ bụ ihu igwe. Chọghị ka ahapụ ha naanị ha n’èzí n’oge udu mmiri. Ewezuga nke ahụ, ejiji ejiji nwere ike ịdị mfe, dabere na uwe ha.
You maara na nkịta ndị na-adịghị awụfu chọrọ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ịkpụcha na brọsh? Ya mere, anyị nwere ike ikwu na obe a abụghị obere ndozi.
Nwee usoro nke ihicha uwe gị Aussiedoodles kwa ụbọchị , ma dozie kwa izu asatọ na iri na abụọ.
N'oge ịwụfu, ọ kachasị mma ịchacha uwe ya kwa ụbọchị iji gbochie matting na iji nweta ụfọdụ ntutu ahụ na aji.
Ọ bụrụ na ị na-ewetara pooch gị na onye na-edozi edozi, ịnwere ike ịrịọ maka ịkpụ ntutu dị iche iche - site na mkpụmkpụ, buzzed clips, long, flowing, to cuts natural.
Vidio a nwere Maximus ya na onye omenkà ọkachamara na-egosi otu esi edozi ma ọ bụ belata Aussiedoodle:
Lelee ntị ha ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n’izu ma jiri a azịza iji hichaa ha ma kpoo ha. Sisi na ntị ha ma chọọ uhie uhie. Chọrọ ịkpachara anya maka ihe ịrịba ama nke ọrịa nje ma ọ bụ nke yist - ihe Poodles na-alụ.
N'oge ọkọchị, mgbe ahịhịa ga-amị mkpụrụ, ị ga-achọ ijide n'aka na ịlele uwe ha, yana n'etiti mkpịsị ụkwụ ha, ntị ha, na ọdụ ha maka isi mkpụrụ.
Chọrọ ile anya maka nkịta ọhịa, nke nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ha abanye n'ime ahụ nkịta.
O di nwute, Aussiedoodles nwere udiri uwe nke foxtails na-adọrọ - ma ha nwere ike izo n’ime ya!
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ nkịta, ịkwesịrị ewepụ mbọ ha otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’ọnwa . Ọ bụrụ na ị nụ mkpọtụ ahụ na tile ma ọ bụ osisi siri ike, oge eruola maka mkpụbelata.
Ọ dịkwa mkpa ka ị na-ele anya na ịdị ọcha nke nkịta gị. Nkịta niile kwesiri ka ha na-ete ezé ha mgbe nile.
Agbanyeghị, ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ Obere Aussiedoodles chọrọ ịsa brushing kwa ụbọchị. Obere nkịta, n’ozuzu ya, na-enwekarị nsogbu chịngọm na ezé.
Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ịma aka iji kpụọ ezé nwa aji gị, ị nwere ike ịnweta eze eji egwuri egwu ma ọ bụ osisi iji nyere aka na ọrụ ahụ.
Ngwakọta ngwakọta Australian Shepherd Poodle bụ nkịta dị elu . Ikwesiri inye ha Nkeji iri isii rue iteghete ị ga - eme kwa ụbọchị . Ọzọkwa, nke a ga-adabere na nha Aussiedoodle gị - obere anụ ụlọ chọrọ obere mmega ahụ.
Ha chọkwara ezigbo ọrụ, ọ bụghị naanị ịgagharị gburugburu ebe obibi. Ọ dịkwa ha mkpa igwu mmiri, gbaa ọsọ, wụlịa, ịchụ, chute, ma kpọọ egwuregwu.
Alsochọrọ idobe uche Aussiedoodle. Canines nke nwere ọgụgụ isi ga - achọta ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nyeghị ha ọrụ - ị nwere ike ị gaghị enwe mmasị na ihe ha kpebiri ime!
Mgbe ọ na-abịa nri oge, Aussiedoodles bụ adịkarị mfe ibu ibu , ya mere, agalafere ha. Itgba ọgwụgwọ ma nwee usoro ihe omume oge niile. Nke a nwere ike inye aka belata oke iri nri ọ bụla.
Nye ha nnukwu mma kibble soro anụ dị ka ihe izizi iji mee ka ha dị mma. Ọnụ nri na ụdị nri ha na-eri kwesịrị ịdabere na afọ, ogo, ogo ọrụ, yana ahụike.
Ná nkezi, otu Aussiedoodle nwere ike iri ihe Iko abụọ ma ọ bụ atọ nke nri nkịta kwa ụbọchị , ma a ga-ekewa ya nri abụọ.
Nkịta niile nwere nsogbu ahụike, mana Aussiedoodles nwere ole na ole karịa nkịta ndị ọzọ. Site na ihu ọma na nlekọta kwesịrị ekwesị, ezigbo enyi gị nwere ike ịnụ ụtọ a afọ ndụ nke 10 ruo afọ 12 .
Enwere nsogbu ahụike ole na ole ị ga-achọ ile anya, gụnyere hip dysplasia, retinal atrophy, ivermectin uche , na cataracts.
Anyị na-akwado ka enyi gị furry na-eleta anụmanụ ahụ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ, ma ọ masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị ya.
Ọ bụrụ na ị dị njikere iweta ụlọ Aussiedoodle mara mma, ọ bụ ezigbo echiche ile anya ịnakwere nke mbụ, ọkachasị ebe ọtụtụ ụdị ụdị dị iche iche na-ejedebe na ebe obibi.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta, jide n'aka na ị na-emeso a ezigbo onye ọrụ .
Onye ọ bụla na-azụ ihe nke na-agaghị ekwe ka ị gaa nwere bọtịnụ PayPal na weebụsaịtị ha ma ọ bụ nwee ọtụtụ litters kwa afọ, kwesịrị izere.
Ndị a bụ naanị ụfọdụ ihe ịrịba ama nke ndị na-azụ azụ ma ọ bụ ndị na-enweta pups site na igwe nkịta.
I kwesịkwara ịkpachara anya maka ndị na-azụ anụ nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche dị na otu oge. Lelee nyocha ha, kwa.
Ọ dị mma mgbe niile ịlele nnapụta mpaghara dị ka Humane Society iji hụ ma Aussiedoodles ọ bụla agwụla ebe ahụ.
Ọ bụrụ na ị kpọtụrụla nnapụta mpaghara ma jụọ maka nkịta ọ bụla na-achọ ụlọ, mana ịchọrọ nhọrọ ndị ọzọ, mgbe ahụ ị nwere ike ịchọgharị weebụsaịtị ndị a:
Nnapụta Aussie na Enyemaka Enyemaka (St. George, UT)
Nnapụta Aussie nke Minnesota (Elk Osimiri, MN)
Mgbapụta Carolina Poodle Pacolet, SC
Nkwado Poodle nke Houston (Houston, TX)
Northwest Aussiedoodles (Malad City, NJ)
Buru n'uche na anyị anaghị akwado ndị na-azụ anụ ọ bụla, ị ga-enwerịrị eme nnyocha gị tupu ewere otu .
Nkịta dị ọnụ ala nwere ike ịdị ka ezigbo azụmaahịa, mana akparamagwa na nsogbu anụ ahụ ị nwere ike ịnagide ga-adị oke ọnụ (ma nwee obi mgbawa) ogologo oge.
Ọ bụrụ n’ikpebie na ị ga-azụ nwa nkịta Aussiedoodle, ebe ị na-awụba n'oké osimiri nwere ike inwe pupy isii ruo asaa, nke ọ bụla nwere ọnụahịa ya $ 800 na elu .
Ugo nke furball ọ bụla ga-emetụta nha, ụcha uwe, na ọgbọ nke Aussiepoo ị nwere mmasị. Canfọdụ nwere ike ịdị oke ọnụ dị ka $ 10,000!
Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-azụ Aussiepoo ị nwere ike ịlele:
Coodwood Creek Doodles (Obodo Salt Lake City, UT)
Ugboro abụọ R Doodles (Stonefort, IL)
Anwụ na-acha Ridge Doodles (Temecula, CA)
Morefọdụ ndị ọzọ a ma ama breeder resources gụnyere Kọfị na mmiri ara ehi (Reno, NV) na PuppySpot . I nwekwara ike nyochaa ndepụta mpaghara na CraigsList, Facebook, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ, ebe ị nwere ike ịchọta ndị na-azụ ihe.
Ọ bụ ihe kwere nghọta ma ọ bụrụ na i chere na Aussiedoodle abụghị ezigbo egwuregwu maka gị. Nsogbu adịghị! Enwere ụfọdụ Doodles na Poos ndị ọzọ ị nwere ike ịtụle.
Ha nwere ike nwe nha nha na odidi, ma ha nwere ike nwe uwe mkpuchi di iche iche, choo ya, ma choro nlekọta.
Labradoodle (Labrador Retriever na ngwakọta Poodle)
Goldendoodle (Golden Retriever na ngwakọta ngwakọta)
Bordoodle (Border Collie na Poodle mix)
Sheepadoodle (Old English Sheepdog na Poodle mix)
Bernedoodle (Bernese Mountain Dog na Poodle mix)
Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel na Poodle mix)
Cockapoo (Cocker Spaniel na Poodle mix)
Nke ahụ ga-abụ nke gị na ụdị ndụ gị. Aussiedoodle ọ na-ada ka ụdị nkịta ị nwere ike itinye na ezinụlọ gị? Àgwà ha na ịhụnanya ha na-eme ka ha sie ike iguzogide.
Na ịkpụ ntutu kwesịrị ekwesị, nkịta ndị a na-adị ka nnukwu anụ ọhịa bekee, ma ekwela ka a ghọgbuo gị.
Ha bụ ibu smart ma jupụtara n'ike obi ike . Ndị a abụghị nkịta ga-achọ izu ike na sofa ụbọchị niile.
Kama, ha chọrọ ịgagharị, igwu mmiri, ịga ije, igwuri egwu na iso ndị ha hụrụ n’anya na-azụ ahịa.
N'agbanyeghị ebe ị ga-eburu ha, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị chọrọ igwu egwu ma soro ndị isi a na-apụ apụ.
Ikwesiri iche na n’agbanyeghi na ha bu ndi na-ebido oge, ha choro otutu nlebara anya na nlebara anya.
Ma oburu na nkea gha enweta gi na agwa ya - na-arụsi ọrụ ike, mara ihe, na-adị ngwa iso ndị ha na-emekọ nkekọ , na juputara n’ịhụnanya na-enweghị njedebe - ha bụ otu onye a ga-atụle.
Kedu ihe ị chere gbasara Aussiedoodle? Mee ka anyị mata echiche gị site na ịhapụ okwu n'okpuru.
Bụ ezigbo mma Pembroke Welsh Corgi bụ ezigbo nkịta m?
Red Golden Retriever: Nduzi Nzuzo Nkịta zuru ezu
pitbull German onye ọzụzụ atụrụ rottweiler mix
osisi wolf vs German onye ọzụzụ atụrụ nha
aha ironic maka obere nkịta
kedu ihe a na -akpọ yorkie na chihuahua mix